I-Ajax isisayine umdlali omusha | News24
I-Ajax isisayine umdlali omusha
Cape Town – I-Ajax Cape Town isiqinise isikwadi sayo ngaphambi kokuba kuqhubeke ingxenye yesibili yesizini ngokusayina umdlali ogijima esiswini eqenjini laseZambia, iZanaco, u-Aubrey Funga.
UFunga uselandele ezinyathelweni zomunye uzakwabo eqenjini, uRodrick Kabwe, ngemuva kokusayina nama-Urban Warriors kulandela ukuchitha isikhashana naleli qembu elizinze eKapa ngaphansi kweso lomqeqeshi, uStanley Menzo.
OLUNYE UDABA:UBenni uthi uyawufuna owokuqeqesha iPirates
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala, washaya amagoli angu-12 emidlalweni engu-36 emiqhudelwaneni kanti wahola iqembu lakhe ukuze liwine isicoco seligi sesi-7 ngonyaka ka-2016 kanti usezwakalise ukujabula ngokujoyina i-Ajax.
“Ngifuna ukuba yimina, ngidlale njengoba ngenza kuZanaco, ngingumshayi magoli kanye nomakhi wamagoli; lokho sekusize wonke amaqembu esengiwadlalelile futhi ngicabanga ukuthi lokho kuzophinde kusize – lawo amava angakufaka kunoma yiliphi iqembu,” uFunga utshele i-website yale kilabhu.
“Ikilabhu, abaphathi kanye nabalandeli babheke lolo hlobo lwamava futhi ngicabanga ukuthi ngizoba ukwengeza okuhle eqenjini.”
UFunga uzobe ebheke ukuthola isikimu uma ngabe ama-Urban Warriors esebhekene neBidvest Wits, eBidvest Stadium, mhlaka-7 kuFebhuwari.